Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » I-Tel Aviv isiya eDubai: inqwelomoya entsha nge-Emirates
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • I-Israel Iphula Iindaba • iindaba • uthutho • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlangayo ze-UAE
Novemba 4, 2021
I-Emirates namhlanje ibhengeze ukuba iza kuphehlelela inqwelo moya yemihla ngemihla engamisiyo phakathi kweDubai neTel Aviv, kwaSirayeli, ukuqala nge-6 kaDisemba.
I-Tel Aviv kunye ne-Dubai ziya kudityaniswa ngenqwelomoya entsha engamisi mihla le yi-Emirates Airlines.
Iinqwelomoya ezintsha ziza kudibanisa iTel Aviv kunye ne-30 Emirates gateways emhlabeni jikelele.
I-Emirates SkyCargo iya kubonelela ngeetoni ezingama-20 zomthamo wempahla indlela nganye phakathi kweTel Aviv neDubai.
Eli nyathelo liza njengoko i-UAE kunye ne-Israel ziqhubeka nokuphuhlisa intsebenziswano enkulu yezoqoqosho ukuqhuba ukukhula kuluhlu lwamacandelo, ngaphezu kokunyusa ukuhamba kwezorhwebo phakathi kwezizwe zombini. Ngeenqwelomoya ezintsha zemihla ngemihla, abahambi bakwa-Israel baya kukwazi ukuqhagamshela ngokukhuselekileyo, ngaphandle komthungo nangokufanelekileyo ukuya eDubai, kunye nokudlula eDubai ukuya kwinethiwekhi yendlela yehlabathi ye-Emirates engaphezulu kwe-120. Amaxesha okubhabha okuya/ukusuka eTel Aviv kuya kunika abahambi ukufikelela ngokulula kwiindawo zolonwabo ezinkulu ngaphaya kweDubai njengeThailand, iZiqithi zoLwandlekazi lwaseIndiya noMzantsi Afrika, phakathi kwezinye.
Ngaphaya koko, iinqwelomoya ezintsha zazisa unxibelelwano olululo olungena ngaphakathi eTel Aviv ukusuka kufutshane ne30 Emirates gateways ukunqumla iOstreliya, eUnited States, Brazil, Mexico, India and South Africa, all home to some of the biggest Jews the Jews in the world. Abahambi abasuka eUnited States bajonge ukuma eDubai ngaphambi kokuba baqale uhambo lwabo oluya eTel Aviv banokufumana iphakheji yeDubai Stop Over, ebandakanya ukuhlala kwiihotele ezikumgangatho wehlabathi, ukujonga indawo, kunye neminye imisebenzi.
IDubai iyaqhubeka nokutsala abakhenkethi bezolonwabo abavela kwa-Israyeli ngoluhlu lwayo oluhlala lukhula lwamava, kubandakanya nokusingathwa kwe-Expo 2020 Dubai etsale utyelelo olungaphezulu kwezigidi ezi-2 kwinyanga yayo yokuqala. U-Israyeli uthatha inxaxheba kwi-Expo 2020 eDubai kunye nepalamente yelizwe layo phantsi komxholo '.ukudibanisa iingcinga – ukudala ikamva'.
Iinqwelomoya ezintsha ze-Emirates nazo ziya kukhulisa unxibelelwano kuluntu lwamashishini kuwo omabini la mazwe, ngokwenza amajelo amatsha kuthungelwano kunye nokwenza amathuba otyalo-mali kuwo wonke amashishini. Ngokuvulwa kohambo lwasimahla lwe-visa phakathi kwamazwe omabini kunye nokucuthwa kwezithintelo kuthungelwano lwe-Emirates, iinkonzo ezitsha ziya kuhlangabezana nemfuno yohambo lwexesha elizayo ukungena nokuphuma eTel Aviv.
I-airline iya kuhambisa i-Boeing 777-300ER yeenqwelo-moya zayo zangoku kwi-configuration yeklasi ezintathu, inikezela ngee-suites zabucala kwiKlasi yokuQala, izihlalo eziphantsi kwiKlasi yoShishino kunye nezihlalo ezivulekileyo kwiKlasi yezoQoqosho ukukhonza abathengi kwindlela ephakathi kweDubai neTel Aviv. Iinqwelomoya zemihla ngemihla zicwangciselwe ukumka eDubai njenge-EK931 ngo-14:50hrs, ukufika kwisikhululo seenqwelomoya iBen Gurion ngo-16:25hrs ngexesha lasekuhlaleni. Inqwelomoya ebuyayo i-EK 932 iya kumka eTel Aviv ngo-18:25hrs, ifike e-Dubai ngo-23:25hrs ngexesha lasekuhlaleni.
Abathengi be-Emirates nabo baya kuxhamla kwi-codeshare ye-codeshare ye-airline ne-flydubai. I-codeshare ibonelela abahambi ngoqhagamshelwano olufutshane kunye nolungenamthungo ukusuka e-Dubai ukuya kumanqaku kuwo wonke amanethiwekhi adibeneyo abathwali bobabini, namhlanje aqukethe iindawo ze-210 kumazwe angama-100.
I-airline iya kuhambisa inqwelomoya yayo ye-Boeing 777-300ER yangoku kwi-configuration yeklasi ezintathu, inikezela ngamagumbi abucala kwiKlasi yokuQala, izihlalo eziphantsi kwiKlasi yeShishini kunye nezihlalo ezibanzi kwiKlasi yezoQoqosho.
U-Adnan Kazim, iGosa eliyiNtloko lezoRhwebo, i-Emirates Airline yathi: “I-Emirates ichulumancile ukwazisa iTel Aviv, enye yeendlela eziphambili kulo mmandla, njengendawo entsha yokufikela. Ngokuqala kweenkonzo kwiiveki nje ezimbalwa, i-Emirates iya kubonelela ngeendlela ezininzi zokukhetha abahambi ukuze babhabhe ngcono ukuya nokubuya eTel Aviv bedlula eDubai. Sikwajonge ngethemba ekwamkeleni abatyeleli abangakumbi bezoshishino nabolonwabo abasuka kwaSirayeli ukuya eDubai, nokuya kwezinye iindawo kuthungelwano lwe-Emirates.
Wongeza: "Sithanda ukubulela i-UAE kunye nabasemagunyeni bakwa-Israel ngenkxaso yabo, kwaye silindele ithuba lokusebenzela u-Israyeli kwaye sivule amathuba okuba la mazwe omabini aqhubeke nokwakha ubudlelwane obuluqilima ngelixa sikhula ishishini kunye nokwandisa ukhenketho kwixesha elizayo."
Ukongeza kwimisebenzi yabakhweli, i-Emirates SkyCargo iya kunika iitoni ezingama-20 zomthamo wempahla indlela nganye phakathi kweDubai kunye neTel Aviv kwi-Boeing 777-300ER ukuxhasa ukuthunyelwa kwamayeza, iimpahla zobugcisa obuphezulu, imifuno kunye nezinye izinto ezitshabalalayo ezivela eTel Aviv. Iinqwelomoya zikwalindeleke ukuba zithuthe imveliso yemveliso kunye nezixhobo, ii-semiconductors kunye neepasile ze-e-commerce ukuya kwaSirayeli.
Abakhenkethi abaya nokubuya kwa-Israel banokujonga phambili ekufumaneni iimbasa ze-Emirates 'inkonzo ephumelele iimbasa kunye nemveliso ehamba phambili kwishishini emoyeni nasemhlabeni kuzo zonke iiklasi, kunye nezitya eziphefumlelweyo zengingqi kunye neziselo ezithandekayo, kunye nokhetho lokutya kwe-kosher ebhodini. Inkampani yeenqwelomoya iqhwa Inkqubo yokuzonwabisa ye-inflight ibonelela ngamajelo angama-4,500 olonwabo olufunwayo kwiilwimi ezingaphezu kwama-40, kubandakanya iimuvi, iinkqubo zeTV, kunye nethala leencwadi elibanzi lomculo kunye nemidlalo, iincwadi zeaudio kunye neepodcasts.
I-Emirates ibuyisele ngokupheleleyo inethiwekhi yayo yaseMbindi Mpuma kwaye ngoku ibhabha kwizixeko ezili-12 kulo mmandla.
I-Tel Aviv sesona sixeko sikhulu nesona sinabantu abaninzi kwaSirayeli, kwaye siyindawo yezoqoqosho nethekhinoloji yelizwe. Isixeko satsala ngaphezulu kwe-4.5 yezigidi zabakhenkethi ngo-2019, ngokweSebe lezoKhenketho lakwa-Israeli. I-Tel Aviv yaziwa ngamalwandle ayo acocekileyo, indawo yokupheka ekhulayo, iindawo zenkcubeko, kunye neyona ngqokelela inkulu yehlabathi yezakhiwo ezingama-4,000 ezimhlophe zesitayile seBauhaus, eziye zaba yindawo yeLifa leMveli le-UNESCO. Esi sixeko sikwaliziko eliphambili lesayensi kunye netekhnoloji yobuvulindlela, enoshishino oluluqilima kunye nenkqubo yokuqalisa indalo evelise izinto ezintsha kunye neemveliso ezamkelwa kwihlabathi liphela nakumacandelo amaninzi.
Abathengi abahamba ukuya nokubuya kwaSirayeli bayacetyiswa ukuba bajonge iimfuno zokuhamba zamva nje Apha